Shabaab oo maanta Bartamaha marko ku gubay Booyad ay leeyihiin AMISOM. - jornalizem
Shabaab oo maanta Bartamaha marko ku gubay Booyad ay leeyihiin AMISOM.
Wararka laga helaayo magaalada marko ee gobalka Sh/Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalamayaal Shabaab ah ay maanta ku guuleesteen in ay bartamaha magaaladaasi ku gubaan Booyad ay lahaayeen ciidamada AMISOM ee Soomaaliya u jooga nabad ilaalinta.
Goob joogayaasha ayaa waxa ay sheegayaan in booyada markii hore lagu qarxiyay Miino kadibna ay dagaalamayaasha Shabaabka ah ay lasoo bexeen sebenno kuwaas oo ay ku ridayeen halkaas oo ay booyadii ku bas-beeshay.
Weerarkaasi oo aan la ogeyn qaraasara nololeed ee kasoo gaaray ciidankii lala eegtay oo ahaa kuwa ka socday dalka Burundi ayaa waxa uu hormuud u noqday in guud ahaan magaalada marko ay kabilaawdaan baaritaanno ay sameynayaan ciidanka AMISOM iyokan dowlada Soomaaliya.
Waa markii ugu horeysay ee kooxda Shabaab ay weerar fool ka fool ah ku qaadaan gaadiid AMISOM ay leedahay oo maraya magaalo guud ahaan gacanta ay kuheyso dowlada Soomaaliya.
Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in kooxda Shabaab ay sheegteen masuuliyada weerarkii maanta ciidamada Burundi lagula eegtay marko ee Booyada looga gubay.